» मिङ्मा लामाको नेपाल आईडल यात्रा–‘रक स्टार’ बाट ‘मेलोडी क्वीन’
मिङ्मा लामाको नेपाल आईडल यात्रा–‘रक स्टार’ बाट ‘मेलोडी क्वीन’
१५ माघ २०७६, बुधबार १३:०३
मकवानपुर, १५ माघ । चर्चित सिंगिङ रियालिटी शो नेपाल आईडलको सिजन ३ मा अहिले गाला राउण्ड चलिरहेको छ । नेपाल आईडलमा रकिङ प्रस्तुति दिँदै चर्चामा आएकी मिङ्मा लामाले शुक्रबार अचानक आफ्नो धार परिवर्तन गरिन् । रक स्टारको छवि बनाएकी मिङ्मा लामाले शुक्रबार मेलोडियस प्रस्तुति दिएर ‘मेलोडी क्वीन’ को रुपमा आफुलाई उभ्याईन् । डिजिटल अडिसनमार्फत नेपाल आईडलमा भित्रिएकी मिङ्मा लामाले नेपाल आईडलको थिएटर राउण्ड अन्तर्गत बेस क्याम्पमा योगेश्वर अमात्यको आवाजमा रहेको ‘लैजा चरी’ बोलको गीत गाएकी थिईन् । उनको आवाजमा फिमेल भर्सन सुन्न पाउँदा निर्णायकहरु निक्कै खुशी भएका थिए । त्यसपछि पियानो राउण्डमा फेरि उनले अर्को रकिङ प्रस्तुति दिएकी थिईन् । उक्त राउण्डमा उनले चर्चित गायक दिपक बज्राचार्यको ‘ओ अमिरा’ बोलको गीत गाईन् । यो फिमेल भर्सन पनि नेपाल आईडलको स्टेजमा रकिङ प्रस्तुति हुन पुग्यो । हेर्नुहोस् भिडियो–
मिङ्माले पियानो राउण्डमा बर्जर ग्लामर मोमेन्ट अफ द उईक अवार्ड समेत जितेकी थिईन् । पियानो राउण्डसम्म रक स्टारको रुपमा चिनिएकी मिङ्माले उत्कृष्ट १२ मा परेसँगै गाला राउण्डमा आफुलाई ‘मेलोडी क्वीन’ को रुपमा उभ्याईन् । उनले सुक्मित गुरुङको आवाजमा रहेको ‘पल पल तिम्रै’ बोलको गीत गाएर विशेष अतिथि जेम्स प्रधान र तिनै जना निर्णायकहरुलाई मन्त्रमुग्ध बनाईन् । निकै भावनात्मक देखिएकी मिङ्माको आवाज र गीतको महशुसमा सबै दर्शकहरु समेत हराए । नेपाल आईडल सिजन ३ मा रकिङ प्रस्तुति दिँदै मेलोडी क्वीन बनेर चर्चामा आएकी अर्की मिङ्मा हेटौँडा निवासी हुन् । उनी २१ वर्षकी छिन् । स्केचेच ब्याण्डमा आवद्ध मिङ्मा काठमाडौँको विभिन्न स्थानहरुमा गीग समेत गर्छिन् । साँगितिक आकासमा चम्कँदै गरेकी मिङ्माले केही गायन प्रतियोगिताहरुमा भाग लिनुका साथै केही कभर तथा ओरिजिनल गीतहरु समेत गाएकी छिन् ।
मिङ्माको भोटिङ कोड एनआई ०६ हो । उनलाई भोट गर्नका लागि नेपालबाट उनको भोटिङ कोड लेखेर एनटिसी, स्मार्ट सेल र एनसेलबाट ३७००० मा म्यासेज गर्न सकिन्छ । त्यस्तै १६६६७७०६ डायल गरेर उनलाई भोट गर्न सकिन्छ भने भारतबाट भोडाफोन मार्फत ५३०१० मा, कतारबाट ओरेडुमार्फत ९२३०० मा र मलेसियाबाट अल टेलिकोसमार्फत ३३३१० मा म्यासेज गर्न सकिन्छ । उनलाई रेस्पेक्ट एण्ड राईज एपबाट तपाईले चाहानुभएको जति रकमको प्याकेज भोट एकैपटक गर्न सक्नुहुन्छ । आदरणिय दर्शकविन्द तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो ? तपाईको विचारमा नेपाल आईडल सिजन ३ को विजेता को बन्नेछ ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोस् । यस्तै भिडियोहरुका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राईब गर्नुहोस् ।